ILogan Paul igxekwa ngaphezulu kweVidiyo yeYouTube kwiJapan 'yokuzibulala kwehlathi' - Ezintsha
Eyona Ezintsha I-YouTube Star ene-15M yabalandeli abagxekwa ngaphezulu kweVidiyo yokuzibulala yaseJapan
ULogal Paul usemanzini ashushu.UJonathan Leibson / Getty Izithombe
Ukuba ungaphezulu kweminyaka engama-20, mhlawumbi awazi ukuba ngubani uLogan Paul. Kodwa igama lenkwenkwezi ye-YouTube lalisemilebeni yomntu wonke ngale ntsasa emva kokuba enze iphutha lokuqala loluntu kwi-2018.
Paul, oneminyaka engama-22 ubudala vlogger Isigidi se-15 sabalandeli baka-YouTube (uninzi lolutsha), waxolisa izolo ebusuku emva kwevidiyo apho wenza khona iziqhulo malunga nendoda eyazibulala kwihlathi laseJapan.
Ikliphu inezimvo ezizigidi ezithandathu ngaphambi kokuba icinywe kwiYouTube. Ngelixa uPaul elumkisa ababukeli bakhe ekuqaleni kwevidiyo ukuba ividiyo iya kuba ngumzobo, akaboneleli ngezilumkiso ezithile malunga nokuzibulala.
UPaul wadubula ividiyo yemizuzu eyi-15 kwihlathi laseJapan iAokigahara, nelaziwa njenge ihlathi lokuzibulala kuba abantu abaninzi baseJapan bazibulala apho. Idatha echanekileyo malunga nenani le-Aokigahara yokuzibulala ayifumaneki, kodwa iJapan iphela inelinye lawona manqanaba aphezulu okuzibulala emhlabeni-phantse Abantu abangama-22,000 bazibulala apho ngo-2016.
Njengoko uPaul nabahlobo bakhe badlula ehlathini, badibana nendoda efileyo-ubuso bayo bufiphele, kodwa umzimba uyabonakala. UPaul ukhwaza uYo, uyaphila kwisidumbu emva koko omnye wabahlobo bakhe uthi akaziva mnandi. UPaul uthi, Ungaze ume ecaleni kwendoda efileyo? emva koko wahleka.
Ekupheleni kwevidiyo, uPaul uthi ukuncuma nokuhleka ziyindlela yokumelana naye, kwaye akakuthatheli ngqalelo ukuzibulala, uxinzelelo okanye ukugula ngengqondo izinto ezihlekisayo. Wadibanisa ikhonkco kwi Umbutho waseMelika woThintelo lokuzibulala kwinkcazo yevidiyo, kwaye wathi akazukuthengisa iintengiso ngokuchasene nevidiyo okanye enze imali ngayo.
Kodwa umonakalo wawusele wenziwe. Abantu abaninzi kwi-Intanethi babelane ngamabali abo Ukujongana neengcinga zokuzibulala, okanye ukuthetha ngamalungu osapho azibulele. Bathe uPawulos wenza ukukhanya ngokubandezeleka kwabo kwaye babelane ngezixhumanisi kwiindawo zokuzibulala njengendlela yokunceda abantu abasweleyo.
U-Paul waxolisa nge-antics yakhe kwileta enomxholo othi Intanda ye-Intanethi. Watsho ukuba injongo yevidiyo yayikukusindisa ubomi ngokwazisa abantu malunga nokuzibulala kunye nokuthintela ukuzibulala.
Andizange ndiyenze impazamo enje ngaphambili, wabhala. Ndilahlekisiwe ngumothuko kunye noloyiko… ngamandla amakhulu kuza uxanduva olukhulu. Ngethuba lokuqala ebomini bam ndiyazisola ukuthi ndawaphatha ngokungafanelekanga la mandla. Ayizukuphinda yenzeke.
Paul, kabani umninawa omncinci uJake ikwayivlogger, ithumele iividiyo kwisiteshi sayo yonke imihla ngaphezulu konyaka. Uye wazizityebi kwizigidi zabalandeli bakhe, ezaziwa njengeLogang-kaPaul Ixabiso eliqikelelweyo ngexabiso yi- $ 6 yezigidi.
Kwaye kujongeka ngathi igama likaPaul liyakusinda kule ntsholongwane. Emva kwesikhalazo, wathumela enye ividiyo , enesihloko Ubomi bokwenene bePokémon Yiya eTokyo. Iqhotyoshelweyo sele ineembono ezingaphezu kwezigidi ezintathu.
Kuyavunywa ukuba uninzi lweevidiyo ezingama-60,000 zamagqabantshintshi zibhekisa kuPaul njengogulayo kunye nontlalontle. Kodwa bonke abo bantu bashiya amagqabaza anomsindo abasakwazi ukuzinqanda ekubukeleni uPawulos ebaleka eAsia.
Umkhosi wase-US wolulwe u-Thin kwiiZizwe ezingama-50 zase-Afrika
Umntu omnye onethamsanqa uya kufumana ithuba lokujonga u-'Mona Lisa' ngaphandle kwetyala lakhe lokubonisa
UScarlett Johansson nguStalker Alien Stalker 'Phantsi kolusu'
Ezona ziNkampani ziNamandla zoBuhle bePR ngo-2018
inombolo yefowuni ekhangela ngegama nedilesi
inyani ngealex jones
i-alan ritchson intaba eluhlaza okwesibhakabhaka
Iinkampani zeballet ezilungileyo kuthi
ifaskoti eblowu izidlo ezithathu zasimahla